Bible n'ime otu afọ - Igbo Bible 1988 - Machị 4
22. Emesịa, ha ruru Betsaida. Nꞌebe ahụ ụfọdụ mmadụ kpọtaara Jisọs otu onye ìs ì rịọọ ya ka o metụ ya aka, ka o bido ịhụ ụzọ.
23. Jisọs duuru onye ìsì ahụ nꞌaka pụọ nꞌobodo ahụ. Mgbe ahu ọ gbụsara ọnụ mmiri nꞌanya nwoke ahụ metụkwa ya aka nꞌanya. Jisọs jụrụ nwoke ahụ sị, “Ị na-ahụ ihe ọ bụla?”
24. Nwoke ahụ leliri anya elu sị Jisọs, “Ana m ahụ ndị mmadụ ka ha na-agagharị agagharị. Kama ha toro ogologo dị ka osisi.”
25. Nke ugboro abụọ Jisọs metụkwara nwoke ahụ aka nꞌanya. Mgbe ahụ anya ya meghere. O bidoro ịhụ ihe nile nke ọma.
26. Jisọs zilagara ya sị ya, “Alaghachikwala azụ nꞌime obodo.”
27. Mgbe ahụ Jisọs na ndị na-eso ụzọ ya gara nꞌobodo nta ndị ọzọ dị gburugburu Sizaria Filipaị. Mgbe ha na-aga nꞌụzọ Jisọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya sị, “Onye ka ndị mmadụ na-asị na m bụ?”
28. Ha zara ya sị, “Ụfọdụ na-eche na ị bụ Jọn omee baptizim, ndị ọzọ na-eche na ị bụ Ịlaịja ma ọ bụ otu nꞌime ndị amụma.”
29. Ma Jisọs jụrụ ha sị, “Onye ka unu onwe unu na-eche na m bụ?” Pita zara sị ya, “Ị bụ Kraịst, Onye nzọpụta ahụ anyị na-ele anya ya!”
30. Jisọs dọrọ ha aka na ntị sị ha agwakwala onye ọ bụla.
31. Emesịa, Jisọs bidoro ịgwa ndị na-eso ụzọ ya ihe banyere otu ọ ga-esi hụọ ahụhụ, na otu ndị okenye, na ndị isi nchụaja na ndị ozizi iwu ga-esi jụ ya. Ọ gwara ha ihe banyere otu ha ga-esi gbuo ya, na otu ọ ga-esi site nꞌọnwụ bilie nꞌụbọchị nke atọ.
32. Ọ gwaghere ha ihe ndị a ọnụ. Ma Pita kpọọrọ Jisọs pụọ nꞌotu akụkụ, bido ịbara ya mba na-asị, “Gịnị mere i ji na-ekwu ụdị okwu a?”
33. Ma Jisọs tụgharịrị lee ndị na-eso ụzọ ya anya gwa Pita okwu nꞌụzọ ịba mba sị ya, “Si nꞌebe m nọ pụọ ekwensu! Ihe ị na-eche echiche ya abụghị uche Chineke, ha bụ echiche mmadụ.”
34. Mgbe ahụ, ọ kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya na igwe mmadụ nọ nꞌebe ahụ ka ha bịa nso. Mgbe ha bịara, ọ gwara ha okwu sị, “Ọ bụrụ na onye ọ bụla achọọ iso m, ya gụọ ndụ ya dị ka ihe furu efu. Mgbe ahụ ya buru obe ya so m nꞌazụ.
35. Nꞌihi na onye na-azọ ndụ ya ka ọ ga-efunarị, ma onye ọ bụla gụrụ ndụ ya dị ka ihe furu efu nꞌihi m, na nꞌihi ozi ọma m, ga-ahụ ndụ nꞌụtọ ya.
36. “Uru gịnị ka ọ ga-abara mmadụ irite ụwa nile nꞌuru ma tufuo mkpụrụ obi ya?
37. Ọ̀ dị ihe ọzọ dị nꞌụwa mmadụ nwere iji gbanworo ndụ ya?
38. Ọ bụrụ na ihere na-eme onye ọ bụla nꞌihi m, na nꞌihi okwu m nꞌụwa ọjọọ a, na nꞌụwa mmehie a, ọ ga-abụkwara mụ bụ Nwa nke mmadụ ihe ihere mụ na onye ahụ inwekọ ihe ọ bụla, mgbe m ga-abịaghachi nꞌebube nke Nna m, mụ na ndị mmụọ ozi dị nsọ.”